भगवान भावनात्मक हुनुहुन्छ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-04 > भगवान भावनात्मक छ
"महिला भावनात्मक हुन्छन्।"
"एक बहिन नगर्नुहोस्!"
"चर्च सिसीहरूको लागि मात्र हो।"
तपाईंले सायद पहिले नै यी कथनहरू सुन्नुभएको छ। तिनीहरू यस्तो भावना दिन्छन् कि भावनात्मकताको कमजोरीसँग केहि सम्बन्ध हुन्छ। उनीहरू भन्छन् तपाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि कडा र कडा हुनुपर्छ। एक मानिस को रूप मा तपाईं नाटक गर्न तपाईं कुनै भावनाहरु छ। एक महिलाको रूपमा जुन व्यापारको दुनिया मा सफल हुन चाहान्छ, तपाईं कठोर, शान्त र भावनात्मक हुनुपर्दछ। कार्यकारी फ्लोरमा भावनात्मक महिलाहरुको कुनै ठाउँ हुँदैन। के यो वास्तवमै त्यस्तै हो? हामी भावनात्मक हुनु पर्छ कि हुँदैन? जब हामी थोरै भावनाहरू देखाउँदछौं हामी बढी सामान्य हुन्छौं? परमेश्वरले हामीलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? के त्यसले हामीलाई आत्मिक, भावनात्मक प्राणीहरूको रूपमा सिर्जना गरेको हो कि होइन? कोही भन्छन् कि पुरुषहरू कम भावनात्मक हुन्छन् र त्यसैले पनि परमेश्वरले मानिसलाई कम भावनात्मक जीवहरूको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो, जसले पुरुष र महिलाको बारेमा धेरै रूढीहरू निम्त्यायो। समाजले दाबी गर्छ कि पुरुषहरू कम भावनात्मक चार्ज हुन्छन् र बदलामा महिलाहरू पनि भावनात्मक हुन्छन्।
सही चीजहरूको लागि भावनाहरू
आफूलाई भावनात्मक हुन दिनुहोस्। यो मानव हुन, ईश्वरीय पनि, यस्तो हुनु हो। शैतानले तपाईंलाई अमानवीय बनाउन अनुमति नदिनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् कि स्वर्गीय पिताले तपाईंलाई सही चीजहरूको लागि भावनाहरू महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। उच्च खाद्य मूल्यहरु को बारे मा रिसाउन छैन। हत्या, बलात्कार, र बाल दुर्व्यवहारको बारेमा रिसाउनुहोस्। टिभी र कम्प्युटर गेमहरूले हाम्रा भावनाहरूलाई मर्न दिन्छ। त्यस्तो बिन्दुमा पुग्न सजिलो छ, जहाँ हामी अब केही महसुस गर्दैनौं, आफ्नो विश्वासको लागि मारिएका मसीहीहरूलाई समेत। यौन अनैतिकताको लागि जुन हामी टिभी र सिनेमामा देख्छौं, बच्चाहरूको लागि जो एचआईभी र इबोलाको कारण अनाथ हुन्छन्।
पापको साथ सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो भावनाहरूको भ्रष्टाचार हो। हामीलाई थाहा छैन कि यो कस्तो महसुस हो। प्रार्थना गर्नुहोस् कि पवित्र आत्माले तपाईंको भावनात्मक जीवनलाई निको पार्नुहुनेछ र तपाईंको भावनाहरूलाई येशूजस्तै गर्नुभयो। त्यसोभए जसको लागि येशू रोइरहनुभएको थियो, उहाँ रिसाउनुभएको थियो, जुन चीजहरूमा येशू क्रोधित हुनुहुन्थ्यो, र जुन चीजहरूका बारे येशू उत्कट चाहना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको लागि तपाईं चिच्याउन सक्नुहुन्छ।
टाकलानी म्यूस्कवा द्वारा